Nhoroondo yeunicorn, mhandara uye nzou - Afrikhepri Fondation
Iyo ngano yeiyo unicorn, mhandara uye nzou
DMakore ekare, panguva yekusikwa kweAreka, Mwari angadai akakumbira Noa kuti aponese mhuka dzeMafashama nekuidziita kuti dzitange vaviri vaviri kuona kupona kwerudzi rumwe nerumwe rwePasi. Unicorn yakaoneka pamberi paNoa oga ... Noa akaramba kuitora achifungidzira kuti akange asisina nzvimbo muareka. Asi panguva imwecheteyo, nzou mbiri dzakapinda muAreka: iyo nyati, yakatsamwa, yakanzwisisa kuti Noa haana kumuudza Chokwadi uye kubvira musi iwoyo aive neruvengo rwakaipa pamusoro penzou.
Akavavenga zvekuti paakaona imwe ichivadya murunyararo, akamurwisa zvine hukasha uye neushingi. Kunyangwe iyo nzou inozivikanwa nesimba rayo uye kukura kwayo ichiedza kuzvidzivirira pakurwisa kwenyati, iyo yekupedzisira ine mahwanda akaomarara uye akapinza zvekuti inoirova parutivi ndokuibaya isina iyo. anogona kuzvidzivirira.
Rimwe zuva, pamucheto wemusha, Iyo Unicorn yakarwisa nzou. Akamurova pasi peguvhu zvakanyanya nehwanda yake yakapinza zvekuti akaizvambura zvachose. Zvino mazuva akapindana vanhu vemuraini vasina kuona nzou yavo. Mafolda ekusava nechokwadi uye kunetseka, vakaenda kuti vamuwane. Vakamuwana ari mupenyu asi akakuvara zvakaipisisa, vakamurapa, ndokubva vafunga kuuraya iyo nyati kuti irege kudzokorora kuita kwakadai.
Iyo chete nzira yekugona kunyengedza kusvinura kweiyo nyoni ndeye kuunza musikana wechidiki mhandara nekuti iye ega ane simba rekunyaradza ichi chisikwa chinotyisa uye chinorwa, icho chinouya kuzadza musoro wayo muchipfuva chayo ndokurara ... iyo nyati payakasvika ikaona musikana mudiki, iye pakarepo akauya kwaari ndokurara pamabvi ake; ipapo vavhimi vakamukomba uye vakamirira kumhanyira kumberi nekumuuraya. Kusvika mumashizha, ivo vaimusora, vakamirira chiratidzo kubva kumutungamiriri wavo, asi iye achizeza. Nekuti kana vakakuvadza kana kuuraya nyati, musha wese unenge watukwa uye kutukwa kwaizomuwira, asi kana akasarapa Nzou yavo Tsvene izvozvi, nekuunganidza ropa reiyo nyati ine masimba ekuporesa. yakasarudzika, yaigona kufa.
Sezvaakafungidzira, murwi asingatyi akapfura museve wakaboora unicorn ndokuzora jira rayo chena dzvuku re cinnabar. Yakafukidzwa muropa reiyo unicorn, mhandara inotizira mumakungwa edondo. Yakakuvadzwa, iyo nyati yakamhanyisa nesimba uye nekumhanyisa paboka revarwi vakaedza kutiza asi vachipenga nehasha zvakavabata uye vakauraya vazhinji. Sabhuku, ukuwo, anokwanisa kuhwanda mumukanwa webako. Kwapera nguva yakati, mhandara diki yakadzokera mumusha ndokuisa jasi rayo pachironda chakakora chenzou ronda rakatanga kupora. Zvichakadaro, mutungamiri anga achiri munzvimbo yake yekuhwanda, akamirira kuti nyati iende kure, nepo iyo nyati, yakatakurwa nenduru yemoyo wayo, ichifamba-famba ichitenderedza chivanze ichi isingakwanise kupinda machiri.
Yakazara nekushushikana, ruvengo, hasha uye kutsiva, iyo nyati yakafunga kunyepedzera chimera, chikara chine musoro-weshumba nemuviri wembudzi uye muswe wedhiragoni, nekumuita kuti atende kuti ichave yake nyika asi nyati yaiziva kuti iye akazadza chimera ne zvisingaite utopias. Inotambudzwa, yakakuvadzwa, iyo nyati yakanga yatsauka kubva pachinangwa chayo chekutanga nekusasanganisa Ruramisiro; zvino Mwari vakamuranga nekumudzinga nekusingaperi panyika.
Aya ndiwo maitiro ekudzivirira Chaos pasi pano, Mwari akadana Pegasus, bhiza rake. Pegasus paakange achinwa musango, sabhuku wemusha akazviona, nhanho nyoro, ndokusvika pairi. Zvishoma nezvishoma, asi zvirokwazvo akasvika padyo naPegasus, akapuruzira rokwe rake jena jena, akabata maneji ake ndokumukwidza achibva afamba akananga kumusha.
Pavakasvika ipapo, vakawana yakabata nehasha dzisingaenzaniswi, chimera chakaparadza zvese zviri munzira yacho, kupisa musha nekuuraya mafirita. Ainge achingoona kuti anga anyengerwa nenyuchi. Kunyangwe varwi vemumusha vakaungana vachirwisa denda iri risingaperi rakawira pamusoro pavo sebakatwa reDamocles, hushingi hwavo hwaitadza kukwana chikara. Idzo dzimba neminda zvaingova madota… Zvese zvaive zvapedzwa neMoto. Saka mutungamiri akashinga chimera, achimurova nemiseve yakawanda ...
Yazara nemiseve, isina simba, iyo mhuka ine misoro miviri yenyoka yakadonha pasi pevhu yakanyura muropa rayo neyavasina mhosva. Ipapo, akaburuka pagomo rake ndokudimbura misoro mitatu yechimera… Pakarepo, izwi rakapararira kuburikidza neAether ndokuti: “zvese zvapera, wabhadharira kukanganisa kwako…
Kwemakore mapfumbamwe, iwe unoziva kurwadziwa kwekusununguka asi nhasi, iwe unozvarwa patsva kubva mumadota ako kunge phoenix nekuti neMoto ndipo pandakakugadzirisira zvachose.
Ini ndichaita kuti kwamakore manomwe akapetwa kanomwe iwe hauzive nzara kana hondo. Nyika yako ichave yakapfuma uye ichabwinya nekuti vanhu vako vacharopafadzwa.
Kubva kuchamhembe kusvika kumaodzanyemba, kubva kumabvazuva kusvika kumadokero, nhoroondo yako icharamba iri mundangariro seboka sedombo guru rerusununguko, rusununguko nerunyararo ”.
Basa raamai munharaunda yeAfrica
Tarisa Basquiat (1996)
Ichokwadi chekuita kweamai muvanhu veAfrica
Zvinangwa - Brian Tracy (Audio)